Ngamaxesha obunzima, yiba Ngumbuki Zindwendwe
Iindawo zokuhlala ngexesha longxamisekileyo zeembacu ezifika zivela eAfghanistan zidingeka ngokungxamisekileyo nangendlela esingazange sayibona ngaphambili. Joyina uAirbnb.org ekuncedeni iimbacu zaseAfghanistan.
Ngabantu abayi-100 000 abafumene iindawo zokuhlala ngexesha lobunzima ukususela ngo-2012.
Emhlabeni wonke, ababuki zindwendwe baka-Airbnb banikezela ngoncedo xa kanye lufuneka kakhulu. Dibana nabantu ababangela ikwazi ukwenzeka le nto.
Amandla Endalo, Abantu Basekuhlaleni Nobubele
Indlela uCarmen nabantu bengingqi yakhe abasebenza kunye ngayo emva kweNkanyamba uMaria.
Sinika abahlali indlela yokumanyana xa kusehla iintlekele. Besebenzisa iinkqubo zika-Airbnb.org, abantu bangavula amakhaya abo simahla, bewavulela abamelwane abadinga indawo yokubalekela.
Dibana noBob kunye noJuan
Iimbacu nabantu abafuna indawo yokhuseleko bangafumana ubunzima obuninzi xa befudukela kwilizwe elitsha. Ukuba nendawo yokuhlala yokwexeshana engabhatalwayo kubenza baphole engqondweni ngoxa beqalisa ubomi obutsha.
Ngu-Els noFode aba
Ukukhusela uluntu kwiCOVID-19 sisebenzisana noCORE
Funda ngendlela esisebenza ngayo nemibutho esisebenzisana nayo efana noCORE ukunceda ekufumanekeni ngokulinganayo kwesitofu sokugonya.
Dibana noZack noCrista
Kungathatha iminyaka ukuba ingingqi iphinde ilunge ngokupheleleyo emva kwentlekele enkulu. UAirbnb.org uncedisa ukubhatalela iindawo zabasebenzi abancedisa ekwenzeni umsebenzi obalulekileyo wokwakha iingingqi kwakhona.
Dibana neqela lakwaMercy Corps
Ukwenza umhlaba osekelwe ekwamkelekeni komntu wonke: Izinto azibophelele kuzo uAirbnb.org
Namhlanje, eqhubekela phambili kwiminyaka eyi-8 yokufunda nakumava, sazisa ngezinto eziliqela azibophelele kuzo ekwamkelweni komntu wonke, ekulinganeni, nasekungakhethini mntu.
Joyina ababuki zindwendwe abangaphezulu kwe-100 000 uze unike abantu indawo yokuhlala simahla xa kanye beyidinga.
© 2022 Airbnb.org. Imvume yeyethu